इपिएस परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ? यी हुन जान्नैपर्ने कुरा – जीवन शैली
Home /टिप्स एण्ड ट्रिक्स/इपिएस परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ? यी हुन जान्नैपर्ने कुरा
यतिबेला झण्डै ९० हजार युवाले कोरिया भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । सन् २०२०को लागि कामदार लैजान जेठको २५ र २६ गते कोरियाली भाषाको परीक्षा हुँदैछ। यसका लागि चैत ८ देखि १७ गतेभित्र अनलाइन आवेदन भइसकेको छ।
बढिरहेको गर्मीसँग तयारीमा रहेका युवाहरूको दिमाग पनि तातिरहेको छ। कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर घरपरिवारको अधुरो सपना पूरा गर्नका लागि दिन रात मेहनत गरिरका छन् हजारौँ। नेपाल बेरोजगारी समस्याले पिल्सिएका युवा कोरिया पुगेर केही कमाइ गरेर परिवारलाई सुख र शान्तिसँग पालौला भन्ने सपना देखिए रहेका छन्।
तर, भाषा परीक्षा दिनु भनेको कुरा मै हुँ भन्नेलाई पनि ठूलो चुनौतिको कुरा हो। यद्यपि बहादुर गोरखालीहरू हार भने कतै मान्दैनन्। यसपटकको भाषा परीक्षासँगै सीप परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने प्रवाधान कोरियाले अगाडि सारेको छ। सो भाषा परीक्षा दिने नेपालीले जान्नुपर्ने कुरा बारे इपीएस शाखाले सूचना निकालेको छ। यो लेखमा हामी त्यसै बारेमा छलफल गर्नेछौँ।
इपिएस परीक्षा दिने नेपालीले जान्नुपर्ने कुरा:
भाषा परीक्षा (EPS TOPIK), सीप तथा क्षमता परीक्षण (Skills and Competency Test) गरी परीक्षा २ चरणमा हुन्छ। भाषा परीक्षा उत्पादनमूलक क्षेत्रको १०० अंक र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ९० अंक हुनेछ। पढाइ (Reading) मा २० र सुनाइ (Listening) मा २० गरी ४० वटा प्रश्न सोधिन्छ। यो दुवै २५/२५ मिनेट गरी ५० मिनेटको हुन्छ।
पास हुन उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ ४७.५ र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ ३६ ल्याउनुपर्छ। धेरै नम्बर ल्याउनेले छनौट प्रक्रियामा प्राथमिता पाउँछन्।
भाषा परीक्षामा पास गरेपछि मात्र सीप तथा क्षमता परीक्षण दिन पाइन्छ।
सीप तथा क्षमता परीक्षण पनि २ चरणमा हुन्छ। क्षमता परीक्षण (Competency Test) मा उम्मेदवारको सम्बन्धित कामको अनुभव, तालिम र शैक्षिक प्रमाणपत्र लाई आधार मानिन्छ। सिप परीक्षण (Skill Test) मा शारीरिक क्षमता (Physical Strength), अन्तर्वार्ता (interview) र आधारभूत सिप (Basic Skills) लाई आधार मानिन्छ।
Color Blindness (पूर्णरूपमा रङ देख्न नसक्ने समस्या) र Color weakness (आंशिक रूपमा रङ देख्न नसक्ने समस्या) भएको व्यक्तिले परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति जस्तै slipped disc/finger amputation भएको व्यक्तिलाई Roster बाट हटाइने सम्भावना हुन्छ।
TAGS: कोरियन भाषा कोरिया सीप